Voadika ny 23 Novambra 2018 3:13 GMT
Nanomana famintinana tsara dia tsara momba ny fomba fitantaran'ireo bilaogera Japoney ny fifidianana parlemantera tamin'ny 11 Septambra 2005 tao amin'ny firenena i David Jacobson ao amin'ny Japan Media Review .
Ato anatin'ity lahatsoratra ity, i Jacobson dia nitatitra ny fisandratan'ilay “vehivavy an-tokantrano lasa mpanao gazety” Ai Izumi, izay 38 taona ary na dia tsy nisy aza ny fampiofanana azy ho mpanao gazety matihanina dia afaka nandrakitra antsafa niaraka tamin'ireo mpanao politika sangany sasany tao Japana izy, ary namoaka fandikana an-tsoratra ny antsafa tao amin'ny bilaoginy.
Ankoatra ny fifidianana, niezaka ny hahazo vaovao farany momba ny “Fisolokiana ny Fehin-tanana Fotsy” ny bilaogera Japoney .
“Misy zaza maty iray isaky ny telo segondra any amin'ny tany an-dalam-pandrosoana”, nampahatsiahy ny mpisera aterineto Japoney ny fikambanana Hottokenai, izay afaka nanampy tamin'ny alalan'ny fividianana fehin-tanana fotsy izay amidin'ny fikambanana any amin'ny fivarotana manodidina sy ny toerana hafa ho 300 yen (2,70 dolara). Nomena anarana hoe “One” ny fanentanana tany Etazonia, ary nanampiana tamin'ny fanamaivanana ny fahantrana any amin'ny tany an-dalam-pandrosoana ny vola azo .
Na izany aza, araka ny fanamarihan'ny bilaogera iray, tsy nisy tamin'ireo vola azo avy tamin'ny fivarotana fehin-tanana fotsy tao Japana no nomena mivantana ireo olona izay nila izany, ary niaiky izany mihitsy aza ny tranonkala Hottokenai .
Ny 90 isanjaton'ny vola azo kosa noho izany dia nolaniana tamin'ny famokarana sy ny fizarana ireo fehin-tanana fotsy (izay vita Shinoa), raha ny 10% ambiny – 30 yen isaky ny fehin-tanana fotsy – dia nampiasaina nanaovana “fanentanana” hanovana ny politikan'ny governemanta tamin'ny fampandrosoana ny firenena . Nahitana ny fikarakarana hetsika, ny fanabeazana ny olona momba ny fanentanana, ary ny fividianana ny fotoana lany amin'ny fampitam-baovao ny hetsika.
Noho izany, raha tsy tena hoe fisolokiana dia maro tamin'ireo bilaogera no nilaza fa fandaniam-bola ihany ny fanentanana natao tamin'ny fehin-tanana fotsy tao Japana.
“Mampalahelo”, hoy ny bilaogera iray, “fa tsy misy ny filazana tany amin'ny fivarotana momba ny fomba handaniana ny vola azo avy amin'ny fehin-tanana fotsy, ary mety hieritreritra mihitsy aza ny olona izay mividy izany fa nanome vola ho an'ireo olona tsy manana izy ireo kanefa raha ny marina dia tsy izany no zava-nitranga .”